Maxay yihiin siyaabaha lagu heli karo dhabarka WordPress?
Backlinks ayaa sidoo kale loo yaqaanaa xiriirada soo galaya ama soo socda. Xidhiidhyadani waxay ku jiraan hal bog bogga laakiin waxay tilmaamayaan mid kale. Adiga oo kor u qaadaya tirada xiriirrada soo socda, waxaad kor u qaadeysaa boggaaga. Taasi waa sababta ay u tahay farsamadii ugu fiicnayd ee kor loogu qaado gaadiidka ilaha webka oo ka dhigo mid si fiican loo yaqaan dadka isticmaala. Tirada iyo tayada backlinks waa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee Google. Taasi waa sababta dib u celinta loo isticmaalo webmasters si loo kordhiyo mawaadiicda bogga iyo sameynta website ka badan SEO-saaxiibtinimo. Haddii goobta la tilmaamo by backlinks dhowr, waxaa badanaa u badan tahay in la baaro by users.
Maxay yihiin sababaha loo soo saaro dib u noqoshada WordPress?
Tirada iyo tayada backlinks ayaa ah qodob muhiim ah oo ku ool ah raadinta mashiinka. Xidhiidhada dibedda ayaa faa'iidooyinka qaarkood ka helaya qaabeynta shabakadda iyagoo soo jiidanaya booqdayaasha cusub ee goobta iyo sidoo kale kordhinta taraafikada bogaggaaga. Waxay door muhiim ah ka ciyaaraan kobcinta saldhiga socota iyo kor u qaadista wacyiga nooca. Intaa waxaa dheer, xiriirada soo galaya waxay faa'iido u leeyihiin dareenka ah in ay hagaajinayso waxqabadka goobta shaqada iyo isku xirka shabakadaha kale.
Sidee loola xiriiri karaa WordPress?
Webmasters oo maamula ilaha websaydhada isla mar qudha ayaa si buuxda u isticmaali kara gadaal si ay isku xidhaan bog kasta. Waa hab fiican oo lagu kordhin karo taraafikada dhammaan bogagga internetka. Si kastaba ha ahaatee, milkiilayaasha bogagga qaarkood waxay dareemaan jahwareer si ay si sax ah u abuuraan dhabarka. Taasi waa sababta aan kuu soo uruurinno qaar ka mid ah talooyin waxtar leh oo kaa caawin doona inaad dib u dhisto boga wanaagsan ee WordPress:
Dib u bedelka dib udhexaadinta goobaha kale
Habka fudud iyo habka abuurida backlinks habboon waa in lagu badalo goobaha kale. Waxaad si fudud ula xiriiri kartaa macmiilahaaga niche oo aad ku dhejin kartid xiriiro faa'iido leh. Waad weydiisan kartaa inuu dib u dhigo dhabarkaaga boggiisa xaaladaada sida aad u sameyn doonto isaga oo kaaga mid ah qaybtaada. Farsamadan guushu waxay ku haboon tahay adiga iyo asxaabtaada labadaba.
Waa muhiim in aad u sheegto macaamiishaada mustaqbalka ee ku saabsan novelies iyo isbeddelka ganacsigaaga. Waxaad u baahan tahay inaad u soo bandhigto warbixintaan si kooban isla markaana kuugu qasbeyso hay'adaha kala duwan ee warfaafinta. Qoraalo wanaagsan oo saxaafadeed ah ayaa lagu daabici karaa qaar ka mid ah boggaga internet-ka ee wargeysyada sareeya kuwaas oo laga yaabo inay kuugu abaalmariyaan sida qoraaga dib u bilaash ah.
Hab kale oo loo dhan yahay oo lagu dhisayo xiriiriyeyaashu waa in lagu qoro markhaatiyada badeecadaha ama adeegyada aad aad ugu mahadcelisid. Haddii marqaatigaagu buuxiyo heerarka loo baahan yahay, waxaa lagu soo bandhigi karaa bogga internetka. Sidaas darteed, qoruhu wuxuu heli doonaa dib-u-habayn khaas ah. Dib u eegista alaabtu waxay leedahay xiriirinta qorayaasha kuwaas oo abuura oo samaysta markhaanti run ah.
Isticmaal kanaalka warbaahinta bulshada
Waxaad ka heli kartaa manaafacaadka isticmaalka bogagga warbaahinta ee bulshada sida Twitter, Facebook, Twitter, Google+ iyo kuwo kale. Waxaad halkan ka abuuri kartaa koontadaada ganacsiga oo ku dar faahfaahinta boggaaga. Si aad u soo jiidato macaamiil aad uwanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u siiso macaamiishaada waxyaabo cusub oo khuseeya iyo sidoo kale waxyaalo kala duwan, tartanno, fiidiyoo, iyo joornaalada Source .